Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Alassane Plea Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Alassane Plea gosiputara Eziokwu banyere Nwatakiri Akụkọ ya, Nmalite ndu, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, ndu, ugbo ala, ndu onwe onye na uru ya.
Lifebogger nwere ihe ngosi dị mkpirikpi banyere njem ndụ ya, site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka ị nụrụ ụtọ ọdịdị nke edemede a, lee nchịkọta nke usoro ọrụ ya. Obi abụọ adịghị ya, nchịkọta zuru oke nke Alassane Plea's Bio.
Akụkọ ndụ Lasso.
Ee, mụ na gị nwere ike ịmara ya n'otu ọkwa nke oge 2020/2021 UEFA Champions League. Kpọmkwem n'otu oge, Alassane Plea meriri okpu na Borussia Mönchengladbach's 6-0 nke Shakhtar Donetsk.
Wezụga oke mmekọrịta ya na Marcus Thuram site na imebi ihe nchebe na isi ihe mgbaru ọsọ, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ ya bụ nke na-akpali akpali. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Alassane Plea Childhood Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha ahụ bụ Lasso. Alassane Alexandre Plea mụrụ na 10th nke Machị 1993 nna ya, Sekou na nne nwanyị France, n'obodo Lille, ugwu France. O nwere ike ịbụ na onye ọkpụkpọ bọọlụ bụ naanị otu nwa amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya ndị sitere na ezinụlọ dị iche iche.
Zute nne na nna Alassane Plea.
Agbata obi nke Lasso na-eto eto toro na Lille bụ mpaghara ime ihe ike. N'oge ahụ, ị ​​ofụ ọgwụ ọjọọ na ime ihe ike bụ ihe jupụtara ebe nile. Eziokwu bụ, ọ bụ mmasị mbụ nke Plea na football mere ka ọ ghara ịbanye na ụwa rụrụ arụ nke ugwu France.
A mụrụ Alassane Plea na Lille.
Ndabere Alassane Plea:
Anyị kwuru na mpaghara Lasso ọkachasị gụnyere ụlọ obibi ọha na eze? Ọ bụ ihe doro anya na-egosi na Plea nwere ezigbo ụlọ ma ọ bụ nne na nna ya bụ ụmụ amaala ka obere.
Alassane Plea Family malitere:
Anyị kwere na ọ ga-eju gị anya ịmata na ịga n'ihu bụ agbụrụ. Ọ bụ ihe ọ bụ. Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ya na enweghị anya ya na-acha agba anaghị eme ka mama ya bụrụ onye France. N'aka nke ọzọ, nna Alassane bụ Malian, dịka nke si mba Africa a na-akpọ Mali.
Alassane Plea Football Akụkọ:
Fọdụ n'ime ncheta oge mbụ nke bọọlụ gụnyere ikiri Zidine Zidane na Ronaldo Luis Nazario de lima gbasaa ihe ha na UEFA Euro 2000 na 2002 FIFA World Cup.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ na 2002 ka ndị scouts si US Ascq hụrụ Plea. Ha hụrụ atụmanya dị egwu na nwatakịrị ahụ wee nye ya nọmba 10 ha. Otú a ka njem njem nke 8 dị mgbe ahụ malitere ịgba bọl.
O siri ike ịhụ ya. Ọ bụ?
N’ịmụta ihe ndị bụ isi n’egwuregwu bọọlụ na klọb Villeneuvois, ihe egwuregwu bọọlụ bidoro ịchọ asọmpi siri ike. N'ụzọ dị mwute, ọ nwetara ebe na ES Wasquehal na 2008. Ọ bụ na klọb ahụ ka Plea dọtara uche Olympique Lyonnais na 2009.
Site na mbido, ihe niile dị mma maka talent na-ebili nke zụrụ azụ nwere mmasị Alexandre Lacazette na Samuel Umtiti. O doro anya na ọdịnihu ya dị mma. Mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta mbụ ya na Lyon, ndị nne na nna Alassane Plea maara na oge ya eruola. N’ezie, ụwa chọrọ ka ọ bụrụ ohi ya.
Alassane Plea Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Na-esote ọnwa mgbazinye ọnwa isii na AJ Auxerre, ọ hapụrụ Lyon maka Nice n'oge okpomọkụ nke 2014 ịchọ oge egwuregwu ọzọ. Midway site na ọrụ ya na ndị Eagles, Plea nwetara mmerụ ikpere ikpere.
Mgbe ọ gbasịrị ịwa ahụ, a gwara ya na o nwere akwa na meniscus. Ihe mmepe a bụ ihe ndọghachi azụ nke mere ka o nwee obi abụọ ma ọ ga-aga nke ọma dị ka ndị ịgba egwu. N'ụzọ dị mwute, ọ kpọrọ nna ya na-ebe ákwá, ma nna ya mesiri ya obi ike na ihe nile ga-agbake. Hụ ihu o mere tupu ahapụ ya ka ị gaa n'ihu na-egwu egwu.
Alassane Plea Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
N'ụzọ dị mma, Lasso gbakere wee chọta ike ochie ya na Nice. Na-egwu egwu n'akụkụ Mario Balotelli, o gosipụtara na ọ bụ karịa wingman site na ịchọta azụ nke ụgbụ 27 ugboro. Na 2018, Lasso sonyeere Borussia Mönchengladbach na nkwekọrịta afọ ise.
Otu o si bido n’afọ abuo gara aga na 2018.
Kemgbe Plea sonyeere ọgbakọ, ọ na-anata otuto maka ịgbakwunye ihe okike na mbuso ọgụ ha. Akara otu ngwugwu atọ na Borussia Mönchengladbach na-ekpochapu 6-0 nke Shakhtar Donetsk n’arụmụka ghọrọ ihe kacha mma Plea na oge 2020/2021. Ọ bụ mmeri kachanụ ọgbakọ nwere na asọmpi asọmpi. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu tinyere isi ya n'okpuru, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Alassane Plea Girlfriend na nwunye na-abụ?
N'ịchọ ịbụ onye isi nchebe na-ewe iwe, ndị mara mma mara mma na-edebe ihe na nzuzo. Gị onwe anyị nwere ike ikwenye na ọ bụ nna, agbanyeghị na ịgaghị eduga onye enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye ya nwere obi ụtọ.
Onye bu kpakpando ndi ozo na-acho?
Nwanyị ahụ na ndụ ya nwere ike ịbụ enyi nwanyị ya n'ihi na ndị na-agba bọọlụ lụrụ di na nwunye na-egosi oke ndị ibe ha. Ka ọ dị ugbu a, anyị ka ga-enweta ozi gbasara nwa onye ọkpụkpọ a mụrụ na Ọktoba 2020. Ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị? Oge ga-agwa.
Mgbe oge ezumike ọ bụla na-abịaru nso, obi nwa anyị nwere obi ụtọ ịnwe ịnọnyere otu ndị mmadụ. Ha bụ ezinụlọ ya. N'ebe a, anyị ga-ewetara gị eziokwu gbasara ndị nne na nna Alassane Plea. Ọzọkwa, anyị ga-enye eziokwu gbasara ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere Nna Alassane Plea:
Sekou bụ aha nna na-aga n'ihu. A mụrụ ya na Mali mana kwagara France mgbe ọ dị afọ 17. Nna na-akwado nkwado nke bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ nwa ya na ịrị elu bụ ihu maara ndị na-ede egwuregwu. Nke a bụ otú o si hụ egwuregwu ahụ na nwa ya n'anya.
N'ụzọ dị ịtụnanya, Sekou bụ onye nkuzi dị ka n'oge ọ na-ede mpempe akwụkwọ Alassane Plea na akụkọ ndụ ya.
Nna Alassane Sekou.
Banyere mama Alassane Plea:
Mama na-aga n'ihu sitere na French. Ọ dị ọcha na nne nke onye na-eti ya ihe n'ihi na ọ na-etinye n'ime ya uru ọrụ ebere.
N'ihi nne ya, Plea ka na-akwalite ọrụ ebere dị ka o kwuru na mbụ ntinye ya na ya weghachiri ya n'uwa. O doro anya na ọ na-ekwu maka ọrụ ebere na otu o si eme ka ọ mata na enwere ndị nọ na mkpa. Omume a agaghị abịa ma ọ bụrụ na nwanyị a mara mma - nne ya.
Alassane Plea na nne ya French.
Banyere ụmụnne nwanne Alassane Plea:
Ọdịnihu nwere ike ịbụ naanị nwa amụrụ nye ndị mụrụ ya. Enweghị ndekọ ọ bụla nke onye ọ bụla na-akpọ aha nwanne ya nwoke ma ọ bụ nwanne ya nwanyị. O nweghikwa ihe o kwuru gbasara inwe ụmụnne. Kedu ka ọ na-adị otu nwa? Plea ga-enwerịrị ọtụtụ ihe gbasara nke ahụ.
Banyere ndị ezinụlọ Alassane Plea:
Ka anyị si na ndụ ezinụlọ ya pụọ. You maara na ozi gbasara ezinụlọ ezinụlọ ya adịghị adị? Enweghi ndu na ndi nne na nna ochie. N'otu aka ahụ, ndị nne na nna ya, nwanne nne ya, nwanne nne ya, nwanne nwanne ya na ụmụ nwanne ya amabeghị ya.
Alassane Plea Ndụ nke Onwe:
Onye bụ nwa nwoke Sekou karịrị ịbụ ọkacha mmasị gị bọọlụ bọọlụ? nọrọ ka anyị na-akọwapụta eziokwu banyere ya iji hụ na ịhụnanya i nwere n'ebe ọ nọ adịghị anwụ. Enwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ide banyere ezigbo mmadụ magburu onwe ya. Agbanyeghị, anyị abụghị ndị Fans na-ewere ihe omimi site na ọkpụkpọ.
Anyị na-atụ aro ka ị zute ya ma ọ bụ lelee ajụjụ ọnụ ya iji nwee mmetụta nke onwe ya maka ịma mma ya, na-amụmụ ọnụ ọchị yana àgwà ọma na ezi uche dị n'ihu ya.
Ànyị kwuru na igwu mmiri bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya?
Plea abụghị naanị egwuregwu bọọlụ. Ọ hụrụ basketball, tennis, ski. Tụkwasị na ndepụta nke ihe omume ntụrụndụ ya bụ ime njem, igwu mmiri na iso ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge. Kedu otu onye ọkpụkpọ egwu zuru ezu?
Banyere otu nwa Sekou si eme ma were ego ya, ọ na-ebi ezigbo mma na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta site na ịbụ kpakpando bọlbụ elu. N'ịbụ onye na-eto eto na onye na-egwu egwu, o nwere ihe karịrị afọ iri nke nkwado na nkwado iji nwee ọ enjoyụ ma melite akụ ya ruru nde Euro 6.5.
You maara na onye ọkpọ ahụ nwere ụgbọ ala dị jụụ nke ọ na-eji iji ọzụzụ aka ike? Anyị na-ekweta na ọ bi n'ụlọ mara mma. Echefula ike ịzụta ụgwọ € 60,000 kwa izu!
Ọ bụ Lasso bụ onye nọ ọdụ n'elu ụgbọ ala ahụ?
Eziokwu banyere Alassane Plea:
Anyị enweghị ike inwe nnukwu ihe. Iji kechie ederede a na akụkọ Lasso na akụkọ ndụ ya, lee ihe 3 gbasara nwa nwoke Gladbach. Ha bu ihe amachaghi ma obu Eziokwu banyere ya.
Nweta ego na Euro (€).
Kwa Afọ: € 3,124,800.
Ọnwa kwa: € 260,400.
Kwa Izu: € 60,000.
Kwa :bọchị: € 8,571.
Kwa elekere: € 357.
Nkeji nkeji: € 5.95.
Sekọnd: € 0.09.
Nwa amaala French (na-eme € 4,130 kwa ọnwa) ga-arụ ọrụ maka afọ 5 na ọnwa abụọ iji mee € 260,400 - nke ọ na-anata kwa ọnwa.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Alassane Plea'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ọ bụrụ na ị maghị, aha ahụ Alassane si n’asụsụ Arabik, ọ pụtakwara “Mma.” Gị, ọ dị mfe ikwere onye dị ka ya Houssem Aouar bụ onye Alakụba mana aha ahụ - Alassane Plea - anaghị ada ụda nke Islam nye ọtụtụ. Onye egwuregwu bọọlụ egosila n’ihu ọha na ọ nwere nganga n’okpukpe ya.
As-salamu alaykum nwa anyi.
Nke a na-egosi na nna ya bụ onye Alakụba nyefere nwa ya nwoke maara ihe bọọlụ nkwenye ya.
Eziokwu # 3 - Egwuregwu Egwuregwu Na-adịghị Mma:
Dị ka Jean-Philippe Mateta - onye otu ibe ya na Bundesliga, Plea na-ata ahụhụ site na FIFA na ọkwa zuru oke. Ndị na-akwado ya kwenyere na ndị egwuregwu abụọ kwesiri ka nwelite ha na-atụle nnukwu mmetụta ha na njikọ German.
O doro anya na otu n'ime ọkwa kachasị mma anyị hụrụ.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ Alassane Plea na akụkọ ndụ ya. Anyị nwere olile anya na ọ kpalitela gị ikwere na ndaghachi azụ bụ akụkụ nke akụkọ ọma. Dị nnọọ ka Plea nwetara nsogbu nke ikpere ikpere tupu ọganihu ya.
Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna onye egwu ahụ nkwado maka ọrụ ya n'okwu na omume. Dị ka ama N'Golo Kanté, Plea bụ otu n'ime ndị nwere agbụrụ Malian ka na-enweta ọtụtụ ịhụnanya site n'aka ndị ikwu ya na mba West Africa.
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'inyefe Ndị egwuregwu bọọlụ French Akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya na eziokwu na izi ezi.
Ọ bụrụ n ’ịhụ ihe ọ bụla na - adịghị mma, kpọọ anyị. Ma ọ bụghị ya, kwuo okwu mgbe ị gagharịchara ngwa ngwa nke Plea's Biography na tebụl anyị Wiki.
Aha zuru ezu: Alassane Alexandre Plea.
aha otutu: Lasso.
Age: 27 afọ na ọnwa 11.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị iteghete nke Machị 10.
Ebe amụrụ onye: Obodo Lille na France.
Elu na Cm: Udo 181 Cm.
Ndị nne na nna: Sekou (nna).
Ụmụnne: NA NA
Ihe omume: Egwuregwu basketball, tenis, ski, njem na iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge.
Ezigbo Net: 6.5 nde Euro.
Ụmụaka Marco Reus Akụkọ nke Na-emeghe Ihe Nkọwa
Bọchị agbanwee: Disemba 15, 2020
Bọchị agbanwee: Disemba 7, 2020